Mayelana NATHI | I-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.
I-Xuzhou Sunbright inama-dozes amaningana ochungechunge lwemikhiqizo ehlanganisa ubuchwepheshe be-optical, mechanical, kagesi nobukhompyutha, kufaka phakathi ama-dopplers ombala, ama-B ultrasound, ama-monitors amapharamitha amaningi, ama-colposcopes, ama-electrocardiograms njalonjalo. Ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, iShanghai Sunbright ithole izethembiso eziphezulu ezivela kumakhasimende amaningi nokunakwa kanye nokusekelwa okuvela kubaholi kuwo wonke amazinga. Njengamanje iSunbright isibe ngumkhiqizo odumile futhi ohamba phambili kulayini, isungule amahhovisi egatsha angaphezu kwama-50 nangemva kwamahhovisi ezinsiza ezifundazweni ezingaphezu kwama-20, omasipala kanye nesifunda esizimele eChina, yathumela imikhiqizo emazweni angaphezu kwama-50 eYurophu, e-Asia, I-Afrika, iNingizimu Melika kanye neNyakatho Melika futhi iba yipulatifomu eyingqayizivele yeSunbright yokuthengisa nokusebenza. "Ikhwalithi enhle kakhulu, isevisi enhle kakhulu" ihlala iyinqubomgomo yekhwalithi yenkampani yethu.
I-Ultrasound, i-Colour Doppler kanye nama-probes ahambisanayo womkhiqizo odumile ngaso sonke isikhathi angumkhiqizo ogqamile weSunbright. Ngo-2019, uSunbright uzuze amakhulu amathenda eMelika, e-Afrika, e-Asia naseYurophu. Okukhipha minyaka yonke kufika kumayunithi angama-50000, ngokuya ngomkhiqizo ojwayelekile we-CE ISO. Ngenqubo eqinile yokukhiqiza, ukuhlolwa okunembile, ithimba lezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, iSunbright izinikele ekuhlinzekeni ngokuqhubekayo imikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo eziphakeme zamakhasimende omhlaba jikelele.
ISunbright Inkampani inemigqa engu-6 yemikhiqizo yokuqapha isiguli, i-ECG, iPumping yokuFakwa, iSyring Pump, i-Fetal Doppler, iPulse Oximeter neThermometer. Inenqubo yokukhiqiza enwetshiwe nokulawulwa kwekhwalithi okuqinile. Kuyo yonke i-chip, ibhodi noma ingxenye, i-Sunbright inokulawula okuphelele kusuka ekugcineni kwayo kuye ekusetshenzisweni, okuqinisekisa ikhwalithi ezinzile yomshini. Ngaphezu kwalokho, umshini wokugcina uzoguga ekushiseni okuphezulu nasekushiseni okujwayelekile ngokwehlukana amashumi amahora, okuyisiqinisekiso esihle kakhulu sekhwalithi ephezulu.
"Ikhwalithi ephezulu, amanani entengo afanele & nensizakalo enkulu ngemuva kokuthengisa" kungumgomo wethu, "Ukwaneliseka kwamakhasimende" umgomo wethu waphakade; imikhiqizo yethu yamukelwe kahle hhayi emakethe yasekhaya kuphela kepha nasezimakethe eziningi zaphesheya emhlabeni jikelele.
1). Izintengo eziqondile zasefektri, ezinokuncintisana okungaphezulu, zinganikeza ngezikhunta ezahlukahlukene, futhi zinikeze izesekeli ezifanayo
2). Ifektri yethu, ilawula ngokuqinile zonke izinyathelo zokukhiqiza, ikhwalithi yokulawula engcono nesikhathi sokulethwa.
3). Ubuchwepheshe bokuvuthwa, ikhwalithi ephezulu, kanye nokukhubazeka okumbalwa kunqubo yokukhiqiza.
Umbukiso & Isitifiketi
ISunbright inamandla okuzimela ocwaningo nentuthuko, uhlelo lokulawula ikhwalithi ephelele, abasebenzi abasezingeni eliphakeme. Njengamanje iSunbright inabachwepheshe abangochwepheshe abangaphezu kwekhulu, inqwaba yabaphenyi besayensi nobuchwepheshe, abasebenzi abangaphezu kwama-300. Kulindeleke ukuthi zilandele ngokuqinile izicelo zekhwalithi kuzo zonke izinyathelo zokukhiqiza nokusebenza. Ngaphezu kwensizakalo eyisisekelo, i-Sunbright nayo inganikela ngensizakalo eyenziwe ngokwezifiso ezinomusa ngokuya ngemfuneko yekhasimende. Ikhasimende kuqala, insiza kuqala yisimiso senkonzo!